Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 04/02/2020)
Otu ihe i nwere ike na-aghọta, bụ na a ezigbo biya Nsoro site Train nwere ike dị na ọtụtụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. The Sheffield Kpatụ bụ otu nke kasị mma, featuring banyere 30 casks na drafts - ụfọdụ nke mata selections si obodo na dịtụ aghọta breweries. Ị nwere ike nweta na ụgbọ okporo ígwè na-aga leta ụfọdụ n'ime ha ... ma ọ bụ nanị ya ịnọgide na-anọ mgbe nlele ha. Olee otú dị mma?!
The ụgbọ okporo ígwè bụ 10 nkeji ije si Cafe, ya mere, ọ bụ ihe ijuanya na ọ bụ na Beer Nsoro site Train – Best beers na Europe.
The oruru a ugbu a ekesịpde Sam Smith Old omume biya. Ha pubs ndị a gaa maka mara mma ụlọ, ọdịnala ales na mma interiors. E nweghị ndị na nnukwu ụdị, dị nnọọ amamiihe àjà si ha onwe ha omume biya na Tadcaster, Yorkshire.
Ọ bụ ezie na ebe omume biya ka modernized ebe 1993, na kilomita nke ịka nká cellars na-anọgide ala bụ akụkụ nke tour. A subterranean n'ịgagharị agwụ na-emeghe osisi ferments na a di na nwunye nke nnukwu osisi orù nke ụdị na e ji nká niile Pilsner Urquell.
Anyị nwere ike ka ị na-na a na nzuzo? The kacha mma biya na Germany bụ bụghị na Munich. Germany nwere nnukwu ihe dịgasị iche iche nke ahụkebe beers. Ọbụna ọtụtụ nke mba everyday brews bụ oke itunanya ọma. Ma, ọ bụghị ọ bụla biya nwere ike magburu onwe, ọbụna n'ala ebe biya bụ akụkọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ iche iche na-amasị gị na gị biya na agwa na sizzle, ime onwe gị a ihu ọma na atụmatụ a tour na Bavarian azụ obodo, ebe biya bụ akụkụ nke obodo omenala na a na-brewed site ndị mmadụ n'ezie na akụkọ na-agwa.
Iri asaa otu obere- na ufọt ufọt size breweries rụọ ọrụ na akụkụ a nke Bavaria. Ụfọdụ n'ime ha na-akpa na azụ ka 1400s. Eleven n'ime ha bụ ma guzosie ike site ụka, na-agba ọsọ site n'ebe obibi ndị mọnk ma ọ bụ ekesịpde ama. Atọ ka na-ejikwara site German ndị oké ozu na otu onye bụ ndị kasị ochie Abbey omume biya na ụwa. Lower Bavaria bụ akụ zoro ezo mgbe ọ na-abịa biya.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-beers-route-europe/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ya / fr ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.